သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 103
အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ (၁၄) ဆရာတော် အရှင်သုမင်္ဂလလင်္ကာရ
အရှင်ပညာနန္ဒ မတ်လ ၃၊ ၂၀၁၂ (၁) ၁၉၉၀ ခုနှစ်က ပတ္တနိကုဇ္ဇနသပိတ်မှောက်ကံဆောင်ပွဲမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဆရာတော်တွေအများအပြား န၀တစစ်အစိုးရရဲ့မတရားဖမ်း ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်တွေထဲမှာ ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် ဆရာတော်တပါး ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီဆရာတော်ကြီးက တော့ ရန်ကုန် မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်က ဆရာတော်အရှင်သုမင်္ဂလလင်္ကာရဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမှာသံဃာတွေသပိတ်ကံဆောင်တော့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ သံဃာတော်တွေလည်း ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားဝင်းအတွင်းမှာ သပိတ်ကံ ဆောင်ဘို့ စီစဉ်ကြပါတယ်။ သပိတ်ကံဆောင်သင့် မဆောင်သင့်ကို မန္တလေးသံဃာထုက ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလထံသို့ စာ ရေး ဆက်သွယ်မေးမြန်းလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်အခါတုန်းကဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလက သူ့ရဲ့သဘောထားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဆွမ်းလောင်းပွဲမှာ ရဟန်းတော်တွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ၊ ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ပုံတွေအတွက် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံ ဆောင် ထိုက် မဆောင်ထိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးဘို့ ဘုန်းတော်ကြီးဆီကိုစာလာကပ်ကြပါတယ်။ ဘုန်းကြီးဆီ စာရောက်တာကို ထောက်လှမ်းရေးကသိတော့ အရှင်ဘုရား ဖြစ်နိုင်ရင်...
မြူတိမ်ဝေဝေ တောင်ခိုးဝေးဝေး (၂၁)
မေခ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၂ (Twilight over Burma – Serial Translation) အခန်း (၁ဝ) စံအိမ်တော်ရှေ့က မြေပြန့်လေးမှာ သုစန္ဒာဘေးကချထားသော ကြိမ်ထိုင်ခုံလေးမှာလွတ်နေသည်။ ခါတိုင်းလို စဝ်ကတောင်ကြီးနှင့် ရန်ကုန် တွင် အစည်းဝေးတက်အလုပ်များနေလို့ လွတ်နေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ချေ။ သို့သော် သည်တကြိမ်တွင်တော့ လွတ်နေသော ကြိမ်ကုလားထိုင် လေးမှာ ခြားနားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိနေသည်။ ထိုအရာများသည် ကြောက်ရွံ့စိုးထိတ်စရာများသာလျှင် ဖြစ်နိုင် ကျန်ရစ်နေနိုင်လေသည်။ သုစန္ဒာသည် မျက်လုံးကိုပိတ်ထားလိုက်သည်။ စိတ်တန်ခိုးဖြင့် မြင်နိုင်သော ဈာန်မျိုးကိုရလိုက်ချင်သည်။ စဝ်ဘယ်နေရာမှာပဲ ရှိနေရှိနေ တန်ခိုးစွမ်းအားဖြင့် ဆက်သွယ် လိုက်ချင်မိတော့သည်။ သူမ နမ့်ပန်းကိုစရောက်ခါစက တိုင်းယိုင်လူမျိုးတို့၏ ဘဝအစိတ်အပိုင်းတွင် လက် ခံကြသော ဝိညာဉ်လောက ပရလောက စိတ်တန်ခိုး အောက်လမ်းပညာတို့နှင့်ပတ်သက်သော...
Naung Kyaw – ကိုထိန်လင်းသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ကိုထိန်လင်းသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ နောင်ကျော်၊ (ကောင်းကင်အင်တာနက်ကယူတယ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၂ ကိုထိန်ရေ ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသား ရဲဘော်ဟောင်းတွေရဲ့ မြောက်ပိုင်းတွင် ကြွေလွင့်သွားသော ကျောင်းသားများ အမှတ်တရနေ့ အခမ်းအနား (၂) ပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၀)ရက်နေ့က ရန်ကုန်မှာ၊ (၁၂)ရက်နေ့က မန္တလေးမှာ ကျင်းပခဲ့တော့ အဲဒီနှစ်ပွဲစလုံးကို ကျွန်တော် အလေးအနက်ထားပြီး တက်ဖြစ်အောင် တက်ခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်မှာလုပ်တဲ့ ပွဲမှာ ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော်ပြန်ဆုံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး စကားနည်းနည်းလောက်ပဲ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြလို့ ကျွန်တော် သဘောထားကို ဒီပေးစာနဲ့ ခင်ဗျားဆီလှမ်းပြောလိုက်တာပါ။ ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော်စပြီး တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတာဟာ 1999 ခုနှစ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ရယ်၊ မန္တလေးထောင်ထဲမှာ အကျဉ်းသားဘ၀နဲ့ ဆုံခဲ့ကြတာရယ်ကို မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ခင်ဗျားတို့ မြောက်ပိုင်း အေဘီပြန်ထွက်ပြေးလားပြီး...
Soe Linn – သူကြွေးရှိက ဆပ်ရမည် ၄ နဲ့ ၅
သူကြွေးရှိက ဆပ်ရမည် ၄ နဲ့ ၅ စိုးလင်း၊ (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ကယူတယ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ၂၀၁၂ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) ရက်ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးနီးပါး ပြန်ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ အဟောင်းတွေအသစ်ဖြစ် စကားတွေပြောလို့မကုန်ခဲ့ပါဘူး။ အကိုကြီး (ကိုထွန်းအောင်ကျော်) အပါအ၀င် ကြွေလွင့်ခဲ့သူအားလုံး အတွက် ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အောင်မိုးဝင်းရေးခဲ့သလို ထွန်းအောင်ကျော်၊ စိုးလင်း၊ အောင်နိုင်ဆိုတာ အတော်တွဲခဲ့ကြတာပါ။ ၁၉၈၉ မေ ၁၉-၂၀ မန္တလေးတက္ကသိုလ်အင်းဝခန်းမမှာကျင်းပတဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများညီလာခံ (ဗကည) အပြီးမှာ ဒီသုံးဦးပိုရင်နှီးခဲ့ကြပါတယ်။ သွားအတူ၊ စားအတူ၊ အိပ်အတူ ကာလတွေပေါ့ ဒီလိုနဲ့ မြောက်ပိုင်းကိုသွားဖို့ ဖြစ်လာတဲ့ အခါ သူတို့နှစ်ဦးက အရင်...
မြူတိမ်ဝေဝေ … တောင်ခိုးဝေးဝေး (၂၀)
မေခ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ( Twilight over Burma – Serial Translation) အခန်း (၉) သူ့ဝါးတဲလေးထဲတွင် အကျဉ်းသားအဖြစ် နေရသည်မှာ ဒုတိယနေ့ပင်ကုန်ဆုံးတော့မည် ဖြစ်လေသည်။ အရင်နေ့တွေကလိုပဲ စဝ်အဖို့ လွတ်မြောက်ရန် ပိုမိုနီးစပ်သောအခြေအနေကို မမြင်ရသေးချေ။ မိန်းတိုင်းမှာ ကွန်မြူနစ်တွေလား အခြားသောင်းကျန်းသူတွေလား ဘယ် သူကများ သူလို လူပေါင်းမည်မျှကို ဖမ်းထားခဲ့ပြီလဲဟု သူတွေးနေမိလေသည်။ သူ့အတွက် ကူညီပေးရန် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုအပေါ်ထားရှိသော မျှော်လင့်ချက်သည်လည်း လျော့နည်းလာတော့သည်။ အကယ်၍ ဖြစ်နိုင်လျှင် ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကပါဝင်လာပြီး နယ်စပ်ကဘိန်းကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်လျှင် ပြေလည်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း သည်ကိစ္စကလည်း အချိန်အတော်ယူရပေဦးမည် ဖြစ်ပြန်သည်။ အခုတော့သူသည် အဖိုးတန်သော ကုန်ပစ္စည်းတခုလို ကျန်နေရစ်တော့သည်။ သူသည် သူ့ညာလက်ဝါးကိုဖြန့်ပြီး...
၀တ်မှုန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၂ မြန်မာတပြည်လုံး ပညာရေးချုံးချုံးကျလာတာ အာအိုင်တီတခုတည်းအတွက် ၀မ်းနည်းနေရမလား ..ပြောလာရင်လဲ၊ ခံရမှာပါ။ ဘာကြောင့် များ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲသွားရသလဲဆိုတာ စဉ်းစားမိပြီး၊ အာအိုင်တီကျောင်းဆင်းများ ဆရာပဲထိုင်ပြီးကန်တော့နေမဲ့ပွဲများကနေ တခုခု လုပ်ဖို့ လိုလာပြီထင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ် http://www.most.gov.mm/techuni/ ကိုကြည့်လိုက်တော့ အာအိုင်တီ (ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်) RIT-Rangoon Institute of Technology ကို ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် YTU Yangon Technology University လို့ အမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ယခင်က ၆နှစ်တက်မှ ရတဲ့ B.E အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို အခုခေတ် အစိတ်စိတ်၊ အပိုင်းပိုင်း တက်နေရပါတယ်။ အရင်က ၃ နှစ်တက်ရတဲ့ ဒီပ လိုမာ ဂျီတီအိုင်ကို ၂ နှစ်ပဲတက်ရတယ်။ နောက်ထပ်...
List of Killed Students – မြန်မာစစ်အစုိုးရ၏ ထောက်လှမ်းရေးများဟု စွတ်စွဲပြီး သတ်ဖြတ်ခံရသူ ကျောင်းသား၊လူငယ်များ စာရင်း ထွက်ရှိ
မြန်မာစစ်အစုိုးရ၏ ထောက်လှမ်းရေးများဟု စွတ်စွဲပြီး သတ်ဖြတ်ခံရသူ ကျောင်းသား၊လူငယ်များ စာရင်း ထွက်ရှိ မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၂ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး(မြောက်ပိုင်း) ပါဂျောင်ဒေသ၊ လိုင်စင်စခန်းတွင် စစ်ထောက်လှမ်းရေးများဟု မတရားစွပ်စွဲကာ နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့ရသူများစာရင်း ထွက်ရှိလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တွင် အဆိုပါစာရင်း ထွက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၂ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက် တွင် သတ်ဖြတ်ခံရသည့် ကျောင်းသားများစာရင်း ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ အရေးအခင်းကြောင့် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ ကျောင်းသား လူငယ် ၇၀ ဥိး ရှိသည်ဟု ရေးသားထားသည်။ အမှန်တရား သည် သင်တို့နှင့်အတူ ရှိသည်၊ သင်တို့ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေဟုလည်း...
Law Eh Soe – ရိုက်ခတ်နေဆဲ ရွှေဝါရောင်လှိုင်းလုံးများ
ရိုက်ခတ်နေဆဲ ရွှေဝါရောင်လှိုင်းလုံးများ လောအယ်စိုး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၂ သာမန်လူသားတဦးဖြစ်သော ကျနော်သည် ချစ်ခင်တတ်သော စိတ်ရှိသလို မုန်းလဲ မုန်းတတ်ပါသည်။ ကောင်းမှန်းသိပေမဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ခက်ခဲသော ခွင့်လွှတ်တတ်ခြင်းကို လက်တွေ့ ကျင့်ဆောင်နိုင်ရန် ဘုရားရှင်ထံမှ ခွန်အားယူရပါသည်။ အထက်ပါ စိတ်နေ သဘောထား နှစ်ခုအပြင် သာမန်လူသားဖြစ်သော ကျနော့်ထံ၌ မည်ကဲ့သို့မျှ ဟန်ဆောင်၍ မရနိုင်တော့သည့် ကြောက်ရွံစိတ်များ ၀င်ခဲ့သော အချိန်များလဲ ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို ထိတ်လန့်ဘွယ်ရာ ကြုံဆုံခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်တခုကို ပြန်၍ မြင်ယောင်မိပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက် မနက်ပိုင်းနှင့် မွန်းလွဲပိုင်းတွေမှာ စစ်အစိုးရသည် ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ အရှေ့မုဒ်ဦးနှင့် ဆူးလေမီပွိုင့်တို့တွင် ရဟန်းနှင့်ကျောင်းသားပြည်သူတွေကို...
U Aye Than (1990 Election – MP) passes away
လူထုရွေးခဲ့တဲ့အမတ်တဦးကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ ဦးအေးသန်း ( ၁၉၄၂ – ၂၀၁၁)၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပေါင်းတည် (၂) ကိုယ်စားလှယ် မိုးမခအထောက်တော်၀၀၇၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၁ ၁၉၉၀ ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတည်မြို့ နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) မှ ရွေးကောက်ခံရသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးသန်း (.အသက်(၇၁)နှစ်) သည် နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၁ ရက်နေ့ ၌ ပေါင်းတည်မြို့ ဘုရားကြီးလမ်း နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန် အနိစ္စ ရောက်သွားပါသည်။ ဦးအေးသန်း သည် ၁၉၆၉ -၇၀ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တတိယနှစ် ကျောင်းသားဘ၀ တွင်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ်အားကစားပွဲတော် အရေးအခင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အင်းစိန်ထောင်တွင် ၁နှစ်ကျော်...
Page 103 of 103«1...99100101102103
ကာတွန်း လိုင်လုဏ်ရဲ့ ရှေ့သွား ... နောက်လိုက်
အောင်သဇင် ● ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ ၂၀၀၈
Myanmar Tea Garden - Fremont
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း - မေလ ၂၀၁၈ - တွဲ ၅၊ မှတ် ၁ ထွက်ပြီ
ရန်ဝင်း (တောင်တံခါး) - “ ပုဂံလက်သစ် ”
အာဏာရှင်ဗိုလ်နေဝင်း၏ဇာတ်သိမ်းခန်း အပိုင်း(၃) - Than Win Hlaing
အေးငြိမ်း – မြန်မာအိမ်အကူလုပ်သားများအတွက် သင်တန်း - ၃
လှကျော်ဇော - ရဲဘော်လွင် (သို့မဟုတ် ) လူ့လောကကို လှစေချင်သူ
Dhamma Beri Ashin Wiriya - Remembering Dr. Maung Maung Oo
၀င်းအောင်ကြီး - ကျနော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (ဆဲဗင်းဇူလိုင်)
ပြည်တွင်း ဒီမိုကရေစီနှင့် ပြည်ပအကူအညီ (၄) - Reporter in Exile
အုန်းနိုင် - ဂန္ဒီခန်းမကြေညာစာတမ်း (၁၁) (“ညီမလေး အရပ်ပုတယ်..။ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် စီးပါ”)
အောင်ခိုင်မြင့် - ၂၀၁၇ ဒိုင်ယာရီ အတွေးအမြင် စစ်တမ်း
မောင်စွမ်းရည် - မျက်မှန်လေးတစ်လက် (သခင်တင်မြနဲ့ အမှတ်တရ)
ဒေါင်းအဆင်ဆန်းတွေနဲ့ ပုဝါအလံလူ (တံဆိပ်ခေါင်းများ)
Join 93,739 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month May 2018 (167) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ဇင်လင်း ● အပြုတ်တိုက်မည်ဆိုသော စိတ်ဓါတ်မျိုးဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရမည်ထင်နေသလား https://t.co/tz4M5Jy5KM https://t.co/7quo8ratHP about4hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ နားပဲ နားစေ …. https://t.co/ke5vmBc3dz https://t.co/vdnBJwHv30 about4hours ago ReplyRetweetFavorite
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) – အိမ်တွင်း သတိပဋ္ဌာန် “ပစ္စုပ္ပန်” https://t.co/GZKvBYh5Ro https://t.co/dWdJ4n94K6 about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကျော်ဟုန်း – ဘီလူးစည်းကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း https://t.co/1pKvxDMJFA https://t.co/Lv6kU1Hn4F about 18 hours ago ReplyRetweetFavorite
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို အထွက် တိုးစေမည့် စပါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့် https://t.co/fOwvlPT0Fe https://t.co/egJocOUq9l about 18 hours ago ReplyRetweetFavorite
Phann Dee Yar - ဖန်တီးရာ ဆုံရပ် (Create Space)
Tony Moe (မမိုး) New York - Beauty Salon